हेर्दा भलाद्मी लाग्ने लाग्ने कानुन व्यवसायीसमेत रहेका यी पुरुष ३ करोड ३५ लाख ठगि आरोपमा केन्द्रिय कारागार चलान !
Posted on March 18, 2019 by T NP
काठमाडाैं, ४ चैत । विभिन्न उच्च तहका व्यक्तिहरुबाट ३ करोड ३५ लाख ठगी गरेको अभियोग लागेका कानुन व्यवसायी गोपाल शिवाकोटी ‘चिन्तन’लाई केन्द्रिय कारागार चलान गरिएको छ ।
ल क्याम्पस खोल्ने नाममा पूर्व न्यायाधीश, समाजसेवी र पत्रकारबाट रकम ठगी गरेका उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार उनी जगन्नाथ देवलस्थित केन्द्रीय कारागार (भद्रगोल जेल) चलान भएका छन् ।
गोपाल शिवाकोटी र बद्रीकुमार थापा मञ्जु श्री एजुकेसनल एकेडेमी प्रालिका सञ्चालक सदस्य थिए । त्यसको सम्पत्ति मासेर विश्वासघात गरेको दाबीसहित उनीविरुद्ध परेको जाहेरीका आधारमा मुद्दा चलेको थियो । शिवाकोटी र थापाको मिलेमतोमा ठगी गरेको जाहेरी उनीहरू दुवैविरुद्ध परेको थियो ।
प्रालिका नामको २ करोड १० लाख ३० हजार, कलेजको जग्गा बेच्ने बहानामा क्रेता रामकुमारी प्रसाईंसँग बैना बापत लिएको ६४ लाख ८५ हजार र थापालाई प्रालिका लागि जग्गा खरिद गर्न दिएको ६० लाख रुपैयाँसहित कुल ३ करोड ३५ लाख १५ हजार रुपैयाँ ठगीको बिगो कायम गरिएको छ ।
शिवाकोटीका साझेदार थापाले प्रालिका लागि जाउलाखेलमा जग्गा किन्ने भन्दै कम्पनीको खाताबाट ६० लाख रुपैयाँ लिएर जग्गा अर्कैको नाममा पास गरेको भेटिएको छ । जग्गा बेच्न थापाले प्रसाईंलाई झुक्याएर लिएको ६४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बैना लिएपछि अर्कैलाई बेचेको देखिएको छ ।
शिवाकोटीले पत्नी कमला सिटौला शिवाकोटी र थापाले पत्नी कल्पना बुढाथोकीको नाममा चलअचल सम्पत्ति जोडेको अभियोग समेत उनीहरूमाथि छ ।
प्रालिका संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी र सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्राडा.पवनकुमार ओझा अध्यक्ष थिए । सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश प्राडा. भरतबहादुर कार्की, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहाल, विश्वकान्त मैनाली, पत्रकार निमकान्त पाण्डे, प्राडा. सुरेन्द्र कोइराला, समाजसेवी कृष्णहरि मैनाली, शिवाकोटी र थापासहित संस्थामा ५३ जना सेयर सदस्य छन् ।